Wararka - Hacks-ka-jarista
Ma doonaysaa in aad "gaabin" wakhtiga manjyada? Ma doonaysaa in aad wax ku ool u noqoto beerta oo aad leedahay wax soo saarka dhamaadka tayada sare leh? Haddii aad tahay beeraley guri oo leh hal geed oo keliya oo ku jira armaajooyinkaaga ama beero acre badan leh oo leh daraasiin noocyo ah, talooyinkan iyo tabahan ayaa ku anfici doona.
Loo yaqaano defoliation, ficilka ka saarista caleemaha geedka sii kordhaya waxay leedahay faa'iidooyin badan. Mid ka mid ah kuwan ayaa ah dib u habeynta tamarta, kaas oo laga yaabo in la gooyo seddexaad ee hoose ilaa nuska geedka si kor loogu qaado tamarta kor loo qaado ama la gooyo qanjidhada sare si kor loogu qaado koritaanka siman (oo loo yaqaan sare). Qaadista caleemaha nool waxay sidoo kale ka caawisaa iftiinka inuu galo saqafka. Iftiinka ka sokow, hawadu waxay si xor ah ugu qulquli kartaa agagaarka geedka, iyadoo la hubinayo inaysan fadhiid noqon. Haysashada qalabka saxda ah ee shaqada waa mid ka mid ah xirfadaha ugu fiican. Waxaan jecelnahay inaan isticmaalno maqas marka aan ka saarno caleemaha taproot. Maqasyadani waxay gooyn doonaan jirid kasta oo aad u baahan tahay.
Marka shaqadu u baahan tahay wakhti badan oo maaddi ah, wakhtigu waa lacag, markaa waxaanu haysanaa farsamooyin aan ku badbaadin karno wakhti. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aan helay waa isticmaalka trimmer.
Marka hore, jar qaybo gaar ah oo ka mid ah dhirta taas oo caqabad ku ah koritaanka guud. Waxay noqon kartaa in caleemaha waaweyni ay xannibaan iftiinka dhirta kale ee xashiishadda, iyaga oo xannibaya. Ka saar caleemaha dhintay ama jaalaha ah, sababtoo ah waxay sidoo kale kicin karaan korriinka oo ay ka saaraan khayraadka dhirta caafimaadka leh. Goyntu waxay ogolaataa socodka hawo dheeraad ah oo joogto ah ilaa bartamaha warshadda, taas oo ugu dambeyntii joojisa caaryada inay koraan. Hubi inaad tixgeliso arrimaha soo socda marka manjooyinku:
Cimiladu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ku dhawaad ​​dhammaan noocyada beeraha. Ku koritaanka xashiishadda bannaanka ee iftiinka dabiiciga ah iyo xaaladaha cimilada ayaa laga yaabaa inay tahay habka ugu fudud, laakiin badanaa ma soo saaro wax-soo-saarka xashiishadda ugu badan. Dhirta waxaa lagu maamuli karaa jawi nidaamsan oo deegaan gudaha ah oo la xakameeyey. Heerkulka iyo qoyaanka oo kala duwan si loo xaqiijiyo kaamil ah, xaaladaha ugu fiican waxay soo saari doonaan natiijooyin tayo sare leh.
Dhir badan ayaa u baahan qorrax ama iftiin badan, dhirtuna waxay u baahan tahay ilaa 18 saacadood oo iftiin ah maalintii inta lagu jiro beerashada khudaarta. Xilliga ubaxa, wakhtiga iftiinka wuxuu isu beddelay 12 saacadood iftiin iyo 12 saacadood oo iftiin la'aan ah. Iftiinka waa in si qumman loogu qaybiyaa dhammaan dhirta. Tan waxaa lagu gaari karaa nalalka LED ama CMH, labaduba waxay leeyihiin tayo iftiin buuxa oo heer sare ah.
Ha ku degdegin koritaanka dhirta sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaadan helin natiijada aad rabto. Goosashada hore waxay ka dhigan tahay in burooyinkeeda geedka aysan haysan waqti ku filan oo ay ku gaaraan awooddooda ugu badan. Haddii aad sugto waqti dheer si aad u hesho faa'iidooyinka, saameyntu waxay ka gudbi doontaa kacsiga tamarta leh una gudbi doonta khibrad nasasho leh. Ka fakar marka la eego natiijada aad rabto inaad gaadho.
Waxaad arki doontaa koror aad u weyn oo xagga tirada iyo tayada wax-soo-saarka dhirtaada labadaba.